Mwube & Ọrụ Ugbo - AOOD Technology Limited
Mgbaaka ndị eji eme ihe eji arụ ụlọ na ọrụ ugbo ga -enwerịrị ihe siri ike yana arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya n'ihi igwe ndị a dị arọ na -arụkarị ọrụ n'okpuru gburugburu ebe siri ike. Slip ring dị ka akụkụ dị mkpa nke sistemụ ndị a dị mgbagwoju anya nke chọrọ ịnyefe ike niile, mgbaama, data sitere n'ọdịdị kwụ ọtọ gaa n'ọdịdị na -agbagharị, ọ ga -emerịrị gburugburu dị iche iche chọrọ ma rụọ ọrụ nke ọma n'ụdị ụdị ọ bụla, ọ dịkwa mkpa iru eru maka ọrụ ogologo oge. okirikiri na -arụ ọrụ.
AOOD raara onwe ya nye idozi ike, akara na nnyefe data maka gburugburu chọrọ. Ndị injinia ọkaibe na teknụzụ nrụpụta pụrụ iche na -enyere AOOD aka ịnye sistemụ mgbanaka siri ike maka akụrụngwa ndị a siri ike. Ọmụmaatụ:
● Ihe mkpuchi mkpuchi kapịlị na -enweghị mmiri maka ndị na -eme mkpọchi
● Akụkụ buru ibu site na mgbanaka amị amị amị maka ndị na -agwakọta ciment
● Mkpuchi mkpọtụ na mgbochi mkpọchi mkpọchi maka akụrụngwa na-egwupụta akụ
● Mpempe akwụkwọ mmịfe ahaziri ahazi maka kranes, ihe eji ebuli elu, igwe n'ọdụ ụgbọ mmiri, ndị na -egwupụta ihe
Site na imewe ruo ule ikpeazụ, AOOD na ndị ahịa na -arụkọ ọrụ nke ọma, ghọta ọrụ nke mgbanaka mgbanaka ahụ ga -aghọta na gburugburu ọrụ, toaa ntị na nkọwa nke ọ bụla, hụ na mgbanaka mgbanaka ihe atụ bụ naanị ihe onye ahịa chọrọ.
Ngwaahịa emetụtara: Site na Bore Slip Rings, Mgbaaka Mgbakwunye Omenala